Ny fomba fijerin'ny firaisana ara-nofo amin'ny filozofia
Ny "tohatry ny fitiavana" dia fampitahana izay mitranga ao amin'ny Symposium Plato . Socrates, izay nanao lahateny tamin'ny fiderana an'i Eros , dia mitantara ny fampianaran'ny pretra iray, Diotima. Ny "tohatra" dia manondro ny fiakarana izay mety hiteraka fanintelony ara-batana ho an'ny vatany tsara tarehy, ny fivoahana ambany kokoa, ny fandinihana ny endriky ny hatsaran-tarehy.
Diotima dia mamerina ny dingana ao amin'io fiakarana io amin'ny resaka karazana zavatra mahafinaritra ny faniriana tia ary manintona azy.
Karazana kanto iray manokana. Ity no loha-hevitra, raha ny fitiavana, izay amin'ny famaritana dia faniriana zavatra tsy ananantsika, dia avy amin'ny fahitana ny hatsaran-tarehy voalohany.
Ny vatana tsara tarehy. Araka ny voalazan'ny fampianarana Platon momba ny Platon, ny vatana tsara tarehy dia mifampizara zavatra iombonana, zavatra iray ahafahan'ny mpihavana tonga amin'ny farany. Rehefa manaiky izany izy, dia mandroso mihoatra ny filalaovana amin'ny vatany manokana.
Fanahy tsara. Aorian'izay, ilay mpivady dia tonga saina fa ny hatsaran-tarehy ara-panahy sy ara-moraly dia manan-danja mihoatra noho ny hatsaran-tarehy. Noho izany dia maniry mafy ny hifaneraserany amin'ireo karazana mendri-kaja izay hanampy azy ho tonga olona tsaratsara kokoa.
Lalàna sy rafitra tsara tarehy. Izy ireo dia noforonin 'ireo olona tsara (fanahy tsara) ary ireo fepetra izay mamporisika ny hatsaran-tarehy ara-moraly.
Ny hatsaran 'ny fahalalana. Ny mpifankatia dia mampifantoka ny saina amin'ny karazam-pahalalana rehetra, indrindra indrindra amin'ny fiafaran'ny fahatakarana filôzôfôma. (Na dia tsy voalaza aza ny anton'izany dia tsy azo lazaina fa ny filôzôfôma fahendrena dia mahatonga ny lalàna sy ny lalàna tsara.)
Ny hatsaran-tarehy-izany hoe, ny endrik'ilay kanto. Izany dia nofaritana ho "lovam-pitiavana maharitra mandrakizay izay tsy tonga na tsy mandeha, izay tsy misy voninkazo na fahaverezana." Izy io no fototry ny hatsarana, "miantoka ny tenany sy ny tenany ho amin'ny firaisana mandrakizay." Ary ny zavatra tsara rehetra dia tsara tarehy satria ny fifandraisany amin'io endrika io. Ilay mpitaiza izay niakatra ny tohatra dia nahatsapa ny endriky ny hatsarana amin'ny fomba fahitana na fanambarana, fa tsy amin'ny alalan'ny teny na amin'ny fomba hafa fantatra amin'ny karazam-pahalalana hafa.
Diotima dia miteny amin'i Socrates fa raha toa izy ka nahatratra ny laharana ambony indrindra teo amin'ny tohatra ka nandinika ny endriky ny hatsaràna, dia tsy ho voasarika intsony amin'ny toetran'ny tanora tsara tarehy izy. Tsy misy afaka manome fiainana mendrika kokoa noho ny mankafy an'io karazana fahitana io. Satria tonga lafatra ny endriky ny hatsarana, dia hanome aingam-panahy tonga lafatra ho an'ireo izay mihevitra izany.
Ity tantara momba ny tohatry ny fitiavana ity dia loharano ho an'ny hevitra mahazatra momba ny "fitiavana Platon", izay ilazana ny karazana fitiavana tsy voatery amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo. Ny famaritana ny fiakarana dia azo raisina ho kaontin'ny sublimation, ny dingan'ny fanovàna karazam-pandrosoana ho an'ny hafa, matetika, izay heverina ho "ambony" na sarobidy kokoa. Ao anatin'izany toe-javatra izany, ny faniriana ara-nofo amin'ny vatana tsara tarehy dia manjavozavo ho faniriana ny filozofia sy filazam-pahaizana filôzôfôma.
Jokes Momba Metaphysika
Top 10 Oldies hira amin'ny fiara
Dr. Roger Starner Jones momba ny Krizin'ny Fahasalamana Amerikanina
Famoronana tontolon'ny sary ho an'ny lalao - Intro
Inona no atao hoe Semantika Jeneraly?
Ny andininy ao amin'ny Baiboly momba ny fampiononana avy amin'Andriamanitra
Ny olana amin'ny fahazavana Fluorescent
Ahoana ny fomba hanamboarana teti-bolamena
Famaritana ny jeografia
Ohatra sy fampiasa amin'ny metaly sy tsy metatra
Ny dikan'ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ny Kristiana
Ireo Top 50 Rock Band Classic
Ny Tranon'i Montague ao amin'ny 'Romeo sy Julia'
Olom-pirenenan'ny lasa - aiza no misy azy ireo?
ACT Comparative Score ho an'ny fidirana ao amin'ny Colleges Illinois
Ny fanisam-bahoaka Amerikana no manambara amintsika momba ny trano fonenana